Inkundla yethenisi yangasese, ukuhamba ngebhayisikili nokuqwala izintaba-Legoland - I-Airbnb
Inkundla yethenisi yangasese, ukuhamba ngebhayisikili nokuqwala izintaba-Legoland
Goshen, New York, i-United States
Ifulethi elikhulu le-studio endaweni yomlando. Izivakashi zinendawo yokungena yangasese enendawo yokupaka eya esitezi sokuqala, isitudiyo esijabulisayo. Indawo yethu inenkundla yethenisi yangasese ukuze isetshenziswe izivakashi futhi itholakala ngqo ku-Heritage Trail, elungele ukugitsheliswa ibhayisikili nokugijima. Ikhaya lethu linqamula amahektha angamakhulu ambalwa ezindawo zasemakhaya ezibukekayo, nokho sitholakala kalula endaweni ebukekayo, engokomlando yaseGoshen - ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela kanye ne-Trotting Horse Museum.
Ifulethi lestudiyo elilungiswe kahle futhi lalungiswa kahle, elikhulu elinamagama athokomele ukuze uzizwe usekhaya. Indawo yethu yezivakashi inekhishi elizimele, eligcwele igalaji, igumbi lokugezela kanye negumbi lokulala elikhulu lesitudiyo/indawo yokudlela/igumbi lokuhlala. Ifulethi line-TV ye-plasma enekhebula ne-WiFi, futhi ikhishi lihlome ngokuphelele ngezinto zokupheka kanye ne-flatware. Muva nje sengeze inhlanganisela yokhiye womnyango ukuze sivikeleke izihambeli ezengeziwe, nakuba sisekuhambeni kancane okuphephile kwe-Goshen.
Ungakhohlwa ukuletha amarakhethi akho ethenisi enkantolo yethu yangasese. Uma uthanda izifundo zethenisi eziyimfihlo, sine-tennis-pro endlini yezifundo ezenziwe ngendlela oyifisayo ngokusekelwe ezingeni lakho lokufaneleka kanye nekhono. Ungakhohlwa amabhayisikili akho ukuze uwasebenzise emzileni we-scenic, ongemuva kwempahla yethu.
Sisebangeni lokuhamba ngezinyawo ukuya enkabeni yedolobhana lakithi.
Siphinde sibe seduze nezindawo zokukhiqiza iwayini eziningana, amapulazi emvelo omkhiqizo wemvelo kanye nokukha izithelo nemifino. Futhi, ungaphuthelwa emakethe yomlimi waseGoshen ngesikhathi sasehlobo. Le ndawo yaziwa ngamahlamvu ayo amahle ekwindla nasebusika.
Uma sineqhwa elisha i-Heritage Trail inokuthula kakhulu ngokushushuluza ezweni elinqamulayo noma ukushayelwa izicathulo eqhweni.
Sitholakala kalula endaweni encane, ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela eziningana, izindawo zokucima ukoma kanye nesitendi sika-ayisikhilimu.
Sihlala kule ndawo futhi siyakujabulela ukusiza kude nomphakathi noma ngohlelo lokusebenza.